युगसम्बाद साप्ताहिक - नेतृत्वका दुई पक्ष– गुनिलो र गुलियो
Monday, 02.17.2020, 12:33pm (GMT+5.5) Home Contact
नेतृत्वका दुई पक्ष– गुनिलो र गुलियो
Tuesday, 09.25.2018, 12:13pm (GMT+5.5)
इरानका राजा (खलीफा)ले राज्यकोषबाट दैनिक तीन रुपियाँ पारिश्रमिक लिन्थे रे ! एकदिन रानीले तीन दिनको पेश्की तलब लिन भनिछन् ईदमा केटाकेटीलाई नयाँ लुगा किन्न भनेर । राजाले भनेछन्– “पेश्की फस्र्योट नगर्दै म मरें भने त्यो रकम कसले तिर्छ ? कि तिमीले खुदाबाट म यति दिन बाँच्छु भन्ने पट्टा ल्याइदेउ, नत्र म पेश्की लिन सक्दिन” । यसको अर्थ राष्ट्रको पैसा जनताको पैसा हुनाले जथाभावी खर्च गर्नु हुँदैन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तर, हामीकहाँ पार्टीका बैठक समेत प्रधानमन्त्री निवासमै गरेर भोजभतेर लगाइन्छ । यो मात्रै होइन, अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय गाउँ तहसम्म सरकारी खर्चमा भूरसी खेलिंदैछन् ।
अरु त अरु पहाडतिरकै मेयर उपमेयरका प्रति बैठक भत्ता २५ सय, मासिक मोबाइल खर्च २५ सय, खाजा खर्च मासिक ४ हजार, मासिक अनुगमन खर्च ७ हजार, दैनिक भ्रमण एक हजार इत्यादि सुनिंदैछ । यसरी देशभरिका भुरे रजौटाहरुको खर्च (मासिक तलब आदि त छँदैछ) देख्दा यो गुलियो पक्ष मात्रै अगाडि देखिन्छ । जनतालाई चाहिएको गुनिलो नेतृत्व गुनिलो सरकार हो । तर यहाँ सबै गुलियाकै पक्षमा दगुर्ने भएपछि यसैलाई जायज मान्नुपर्ने स्थिति तयार गरिंदैछ भने यो सुल्टो हो कि उल्टो ? बुझ्नै गाह्रो भयो । ‘दौरा न सौराको खल्ती’ भनेझैं नसुहाउने काम त गर्नु भएन नि, घाँटी हेरेर हाड निल्नुप¥यो । आफ्नै तलब भत्ता सुविधा मात्रै बढाउने कामले राम्रो सन्देश देला र ? अझै पनि सोच्नु राम्रो होला ।
विगतदेखिकै नेताहरुका सबल र दुर्बल पक्ष आज पनि उीत्तकै चर्चामा छन् । दूरगामी प्रभाव पार्ने पक्षले निकै महत्व राख्छन् । विवेकपूर्वक काम भएन भने भविष्यसम्म नै खटकिन्छ । गिरिजाप्रसादले ‘यो एकपटकलाई’ भनेर १ लाख ७० हजार ४२ जना भारतीयलाई जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता दिन लगाएर स्वार्थ सिद्ध त गरे, तर तिनले नेपालको नागरिकता लिनभन्दा अघि नै तिनीहरुबाट जन्मेकालाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्छ भनेर भुईफुट्टाहरु उफ्रेपछि फेरि बाबुराम भट्टराईले पनि साथ दिए । जन्मसिद्ध दिंदा पनि उब्जने समस्या सोचेको देखिएन । ‘यो एकपटकलाई’ भन्नुका अर्थ जसलाई दिइयो तिनैलाई मात्र हो, अरुलाई पनि होइन भनेर नेताले बुझेनन् या मालिक रिझाउन बुझ पचाए ? कतैबाट निर्दिष्ट भएर वा गुलियोमा भुलेर आँखा चिम्लदा धेरै अनर्थ भएका छन् ।
“नियम गर, ध्यान गर खानैका लागि” भनेझै अब निजगढ विमानस्थल बनाउन २४ लाख रुख काट्ने र आठलाख हेक्टर जमीन उपलब्ध गराउने भनेको सुनिंदैछ । दुःख पाएका आम जनताका लागि आवश्यक ससाना काम पनि गर्न नसक्ने सरकारले त्यो काम ककसको स्वार्थका लागि गर्दैछ भन्ने प्रश्न उठेको छ । आर्थिक समृद्धि ल्याउन यो विमानस्थल बनाउने रे ! तर कसको आर्थिक समृद्धि ? त्यत्रो राष्ट्रिय सम्पत्ति मासेर वनमाफिया, भूमाफिया र अरु व्यापारी, व्यवसायी, ठेकेदार, धनाढ्यका पछि लाग्नुको अर्थ बुझिनसक्नु भएको छ । यो सबैका पछाडि गुलियोकै प्रभाव हुनुपर्छ भनिंदैछ । जलमाफियालाई खोलानाला त सुम्पिएकै थिए, अब तराईका वनमा पनि प्रवेश पाउने भएपछि नेपाल खँगार्ने नै स्थिति देखिंदैछ । विचार परिपक्व भएर नेता बनेका भए पो, यहाँ त आकस्मिकताबाट नेता बनेका पनि थुप्रै भएपछि यस्तै हुँदोरहेछ कि कुन्नि !
हुन पनि यहाँ नेताको साइज नै यति मिलेको छ कि जुनसुकै व्यवस्था आए पनि फिट हुने ‘युनिभर्सल नेताहरु’ छन् । सात सालदेखि आजसम्म त्यस्तै देखिंदैआएको छ । साइज नमिलेर नेता र मन्त्री हुन नपाएको यहाँ कोही भएन, यो नेपालकै विशेषता भएको छ । एकैजना कैयौंपटक बेग्लाबेग्लै व्यवस्थामा मन्त्री भएका पनि पाइन्छन् । सातसालदेखि आजसम्मका मन्त्रीहरुको सूची हेरेमा थाहा हुन्छ । एउटै मान्छे पाटी फेरेर पनि कतिपटक मन्त्री भएका छन् । तिनीहरु नै फेरि शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै हत्या हिंसाको बिराधेमा सडकमा उत्रनेलाई लौः समाजवादको आधार निर्माण गर्न लागेको सरकारबिरुद्ध अराजकता फैलाउन लागेको आरोप लगाउँछन् । तिनीहरु नै फेरि देश विकासका भाषण गर्छन्, तर समस्या जहाँको तहीं हुन्छ । यसको मूल कारण नेता र मन्त्रीकै स्वार्थी र गुलियोपनको मनोदशाले गर्दा पाइला पाइलामा ठेस लाग्ने गरेको छ ।
अहिले त झन् ओलीजीको जल्दोबल्दो प्रधानमन्त्रीत्वकाल हुनाले भाषणका पर्रा छुटेका छुट्यै छन् । भाषणको प्रगति त अभूतपूर्व नै भएको छ । सबैको सबै कुरामा पहुँच र विशेषज्ञता हुँदैन । ओजीजीको आफ्नै विशेषता छ, जो अरुमा छैन, ओलीजीको रीस गर्नु बेकार छ । पञ्चतन्त्रको कथा जस्तै (खसीलाई कुकुर सिद्ध गराइदिने) सामथ्र्य हाम्रा प्रधानमन्त्रीमा छ । भन्न त उहाँका भाषणलाई समस्या समाधानको चासोभन्दा आफ्नो एकोहोरो लिंडेढिपी बढी भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । साथै निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यापछि देशव्यापी बिरोध हुँदा पनि बेवास्ता गरेको अपजस पनि उहाँमाथि छ र कम्युनिष्टको जातै रुखो भनेको पनि सुनिंदैछ । तैपनि उहाँबाट आफ्नो पदीय मर्यादा अनुकूल व्यवहारको अपेक्षा गर्नैपर्छ ।